Iiprojekthi Zasekhaya | Ucanzibe 2022
Udidi Iiprojekthi Zasekhaya
13 Iitshiphu zekrisimesi ezingamaxabiso aphantsi, ezilula nezimangalisayo onokuzenza ngokupheleleyo
Ufuna i-tacky? Nantsi ingqokelela.
Yintoni i-HGTV engazange ikuxelele yona malunga 'neFixer Upper'
Nangona i-Chip kunye ne-Joanna Gaines 'Fixer Upper amakhaya ngokungathandabuzekiyo mihle, kukho izinto ezithile i-HGTV ebingafuni ukuba uyazi ngalo mboniso.
Iingcamango zobugcisa zokuGubungela iibhokisi zeBreaker kunye nezinye iipaneli zoMbane ezingabonakaliyo
Sukuvumela ukuba babe rhabaxa uyilo lwakho lube mellow.
Nantsi iNyaniso malunga nezo ziFlo Pot Pot
Iifashini ezihamba phambili, ezisebenzisekayo zinokubonakala ngathi azinangqondo, kodwa kunokubakho izinto ezifihlakeleyo. Siphula izinto ezilungileyo nezingalunganga zokugcwaliswa kwembiza ekhitshini lakho.
Ezi zintsimbi zili-13 zelindonga elixhonyiweyo ziya kujongana kwangoko ngeJazz kwindawo yakho
Iindwangu zokuxhoma eludongeni azongezeli kuphela ukwakheka kwiindonga zakho, kodwa zikwalula kakhulu ukuxhoma. Kudala zahamba iintsuku xa ulungiselela udonga lwegalari okanye ukubeka ipowusta yayizezona zikhetho zakho zokongeza into ekubambisa amehlo eludongeni olungenanto. Ukuxhonywa kwamalaphu kusebenza phantse kuso nasiphi na isithuba (cinga emva kwesofa okanye ngaphezulu kwebhedi), kwaye unokufikeleleka ngakumbi kunobugcisa obuzinzileyo, ke apha ngezantsi, izimvo ezili-13 zokusebenza kwelaphu elilelisiweyo kulo naliphi na igumbi ekhayeni lakho, akukhathaleki ukuba ungubani okanye ubungakanani bendawo yakho.
Ungasusa njani izitikha kunye neelebheli kwiglasi
Kuxhomekeka kubuntu bakho, ukucofa ilebheli kunokuba yeyona ndlela ibalaseleyo okanye eyona imbi yokuchitha isiqingatha seyure. Ukuba lelona phupha lakho libi, sinesipho esikhulu kuwe esingayi kuba nesitikha sakho kwisithuba nje semizuzu embalwa! Guqula iinwele zakho zibe bubushushu obuphezulu kwaye ububambe ngaphezulu kwesitikha malunga nemizuzwana engama-45. Emva kwemizuzwana engama-45 yobushushu obuthe ngqo, vavanya ikona yesitikha kwaye ubone ukuba iyaxobeka ngokulula.
Iindlela eziqaqambileyo zokusebenzisa iiTsala kunye nezibambo ongazange wazicinga
Inyaniso malunga ne-Soapstone Kitchen Countertops
Xa kuziwa kumanqwanqwa amatye endalo, kukho iindlela ezingaphaya ngaphandle kweemarble kunye negranite. Ukuba uyabuthanda ubuhle obumnyama begranite kunye nokukhanya okuqaqambileyo kwemarble, jonga endaweni yelitye lesepha. Kuhlala ixesha elide, kugcinwe ulondolozo olusezantsi, kwaye kunesimo esihle, esidala-sehlabathi. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi. Iindleko: Kwihlabathi eligqibeleleyo, iindleko aziyi kuba yinto ebalulekileyo kwizigqibo ze-countertop. Kodwa eli lelokwenene, kwaye kufuneka liqwalaselwe.
Ifenitshala encinci ye-IKEA Dollhouse yeyona nto ilahlekileyo kubomi bakho ngoku
Oku kwenza onke amaphupha amancinci eScandinavia azaliseke.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nendlela yokukhulisa ingca yangaphakathi
Kuzo zonke izindlu zendlu ezipholileyo, imifuno eluncedo, kunye nemithi yangaphakathi efumanekayo, ingca ayisoloko iyinto yokuqala ethi qatha engqondweni xa ujonge ukuzalisa iindawo zakho zangaphakathi ngendalo ephilayo. Kodwa nangona olu hlobo lwesityalo luhlala luhambelana neeyadi ezingasemva kunye nokuhonjiswa komhlaba, lenza ukhetho olukhulu kwigadi yesikhongozeli esingaphakathi enokuba yeyokuhombisa kunye nokusebenziseka, nokuba ikhulele izilwanyana okanye ivunwe ukwenza izinto ezifana nejusi eluhlaza.
Ukusuka kwinto elula ukuya kwinto exabisekileyo, nazi ezinye izimvo zomgangatho omangalisayo wokutsiba eyakho i-oasis yangasemva kwendlu kwaye wonwabe ngehlobo.
Sinemibuzo emibini malunga neeSinki eziMnyama zaseKhitshini
Yithande okanye uyithiye, ngekhe uyiphike ukuba iyamangalisa.
Uyakha njani iishelufu zeenkuni ezide ezidadayo (ezingazukuphaka embindini)
Yonke le veki sithetha ngokulungiswa kwendawo yokuhlambela, ukuqala ngohlaziyo luka-Ashley lwamva nje, kunye nokulandela iitoni zezithuba eziluncedo malunga nenkqubo! Iishelufa ezidadayo ziyinto entle, kwaye bendisazi ukuba ndifuna enye ngaphezulu kwebhafu kwigumbi lokuhlambela elitsha. Sikhangele phezulu nasezantsi ishelufu yokudada engakhange ibonakale intle kuphela, kodwa enokubamba ubunzima obuninzi ngaphandle kokugogeka- ngakumbi ngoba udonga lude kakhulu.
Ungayenza njani into engavakaliyo ukuPhahla (ukuze usenakho ukuthanda abamelwane bakho abaphezulu)
Ungayikhusela njani isilingi, kunye nemiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo ukusuka kubuchwephesha.
Umhlaba onomngundo, amaKhowa amancinci, kunye neengxaki zezityalo ezi-6 eziNinzi-kunye nendlela yokuzilungisa
Ungazilungisa njani iingxaki ezisibhozo zokufaka indlu, ukusuka kwiingcongconi zomngundo ukuya kumhlaba obumbeneyo.
Ayisiyiyo iBacksplash yakho esisiseko: Enye indlela ethandekayo, yokuGcina uLondolozo oluPhantsi kwiThayile
Le ayisiyiyo imva yokubuyela umva kwakho okuyisiseko.
Ezi ngcamango zePatio zeGadi ziya kukwenza ufune ukuchitha lonke ixesha lakho ngaphandle
Ngokuqinisekileyo, kulungile ukukhula kwezityalo eyadini enkulu. Kodwa nokuba indawo yakho yaphandle kuphela ibhalkhoni encinci okanye ipatio, kusekho izimvo ezikrelekrele ezikunika igadi entle apho.
Iinkcukacha zoyilo lweVintage ezingasokuze ziphume kwisitayile
Uqinisekisiwe ukuba umhle ngonaphakade.
Izitulo ezi-6 eziSongelwayo zangaphandle ngoko ke ziNgcono uya kufuna ngokupheleleyo ukuzisebenzisa ngaphakathi
Ezona zitulo zisongekileyo zingaphandle zeveranda okanye ipatio.
Khulisa isaladi yegadi kunye nale mifuno ili-13 onokuyityala ekuqaleni kwentwasahlobo
Imifuno onokuyityala ekuqaleni kwentwasahlobo ukuvuna ehlotyeni, kubandakanya iiradishes, iletisi, isipinatshi kunye nokunye.
lithetha ntoni 11 11
Intsingiselo yenombolo 1212
Intsingiselo ye-10: 10